Manchester United Iyo Leicester City Oo Loo Qaban Doono
Manchester United iyo Leicester City ayaa lagu kala saari doonaa ciyaar isreeb-reeb ah oo labadooda oo kaliya loo qaban doono si ay midkooda uga soo qayb-gasho tartanka Champions League oo ay kaalinta afraad ugu fadhiisato.
Chelsea, Manchester United iyo Leicester City ayaa si adag ugu dagaallamayay labada boos ee saddexaad iyo afraad illlaa horraantii sannadkan, waxaanay u muuqataa in Blues iyo Red Devils ay ka faa’iidaysan doonaan Focex oo guul-darro xun kala kulantay Tottenham oo 3-0 ku garaacday xilli hal ciyaar oo kali ahi u hadhsan tahay.
Haddii Chelsea ay labada kulan ee u hadhay badiso, waxay ku dhamaysan doontaa kaalinta saddexaad, laakiin Manchester United iyo Leicester oo ay ciyaari iskugu hadhsan tahay ayay xaaladdoodu cirka ku shareeran tahay, waxaana suurtogal ah in Premier League uu markii ugu horreysay ku qasbanaado inuu qaato arrin uu kula tacaalayo xaalad aan lagu talo-gelin oo soo bixi karta.
Premier League ayaa ku qasbanaan doona inuu ciyaar lagu kala saarayo u qabto Manchester United iyo Leicester City marka uu horyaalku dhamaado, haddii Man United ay kulankeeda West Ham kaga badiso 5-2, isla markaana ciyaarta ugu dambaysa horyaalka ee toddobaadka dambe ay Leicester ku garaacdo Man United 1-0.
Haddii Manchester United ay 5-2 kaga badiso West Ham, waxay yeelan doontaa 62 dhibcood, 68 gool oo ay dhaliyeen iyo 38 laga dhaliyey.
Leicester City oo hore u dhalisay 67 gool, waxay markaas u baahanaysaa in Manchester United ay kaga badiso 1-0 si ay ula sinnaato goolasha ay dhalisay ee 68ka ah, waxaana uu goolkaasi keeni doonaa in tirada goolasha laga dhaliyey ay iskaga mid noqdaan iyadoo hadda shabaqa Foxes la taabsiiyey 39. Goolka Leicester, haddii ay 1-0 kaga badiso United waxa uu keeni doonaa in tirada goolasha ee Red Devils laga dhaliyey ay noqdaan 39.
Haddii ay sidani dhacdo, waxa labada kooxood loo qaban doonaa ciyaar ku celis ah oo lagu go’aaminayo midkooda u gudbi doona tartanka Champions League ee xili ciyaareedka dambe, waxaanu kulankaasi dhici doonaa July 29 oo ah laba maalmood ka hor ciyaarta finalka FA Cup.